Onye guzobere Institute Lagos kwuwapụtara Ifedy Eze dịka onye isi nchịkwa
Edylọ ọrụ guzobere ya na ozi ya na-aga n'ihu iji nyere obodo nke ndị nwere ọgụgụ isi na ndị nwere mkpali aka iwulite ụlọ ọrụ teknụzụ nwere mmetụta n'ụwa niile ekwuputala Ifedy Eze dị ka onye isi njikwa nke Lagos Chapter.
Nhọpụta ahụ na-abịa na mkpa iji hụ na onye guzobere Institute Lagos na-aga n'ihu na-apụta ìhè na ọpụpụ nke ndị na-eme ngwa ngwa.
Ifedy so na ndi isi oru nchoputa nke ulo oru ndi guzobere ulo akwukwo Lagos na February 2019, onodu o no rue n’onwa iri n’out nke 2020, mgbe ahuru ya dika onye isi ndi isi.
Dị ka a zụrụ ọkàiwu na ahụmahụ Business Strategist na a gosipụtara akụkọ ihe mere eme nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-agba izu.
Site na iru eru a kwadoro na mmepe azụmaahịa na njikwa njikwa, Ifedy nwere nka na mkparịta ụka, atụmatụ azụmahịa, azụmaahịa, mmekọrịta mmekọrịta, yana otu ụlọ.
Ifedy egosiputawo acumen ya dika ihe putara ihe na onye ndu ndi ndu ya na ndi guzobere ulo akwukwo Lagos na ndi ozo ato.
N’ikwu okwu banyere nhọpụta ya, Ifedy Eze kwuru, “Nhọpụta a bụ nkwado nke ọrụ siri ike na nke siri ike nke ndị otu Lagos guzobere Institute mere n’ime ọnwa ole na ole gara aga.
Enwere m obi ekele dị ukwuu maka nkwado m nwetara site na otu ndị isi otu mpaghara, ọbụlagodi na m tụkwasịrị obi na nkwado ha na nke onye ndu ụwa niile ka m bidoro n'ọfịs ọhụrụ a.
A ga-etinye oge m dị ka onye isi njikwa ga-etinye ọnọdụ nke onye guzobere Institute Lagos dị ka onye ndu ndụ, na-emekọ ihe ọnụ na ndị ọzọ nwere oke n'ihe gbasara mmalite mmalite nke Africa iji meghee ikike azụmaahịa nke nnukwu kọntinent anyị. "
Ebumnuche nke "Ijikọ ndagwurugwu Silicon" na inye ndị ọchụnta ego nwere ọgụgụ isi ma nwee mkpali iwu ụlọ ọrụ ndị ga-ewepụta otu nde ọrụ ọhụrụ, Africa bụ, otu ebe aga-ejedebe na nke a nwere ike ịmị mkpụrụ ma obi abụọ adịghị ya na nhọpụta a na nso nso a ga-eme Onye guzobere Lọ akwụkwọ, Lagos, isi ihe ndekọ banyere mmeri ndị ọzọ na Lagos.
Ntọala guzobere na-enyere ndị ọchụnta ego aka, na iwulite ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide, yana netwọkụ nkwado, tinyere ego na ihe ịga nke ọma ha na site n'usoro azụmaahịa ahaziri ahazi.
Mụta ihe banyere FI Ebe a na otu o nwere ike isi nye aka tinye uru na mbido gị.